Tag: ecommerce madal | Martech Zone
Tag: ecommerce madal
Xawaaruhu waa lacag. Waa wax fudud sida tan marka ay timaado ganacsiga elektaroonigga ah. Kaliya maahan macaamiisha inay ka tagayaan bartaada markii aysan si fiican ugu shaqeyneyn desktop-ka ama moobiilka. Saamaynta xawaaraha bogga iyo bogga sidoo kale qiimeynta mashiinka raadinta. Mashiinnada raadinta ma rabaan isticmaaleyaashu inay jahwareeraan markay booqdaan goob gaabis ah, markaa wax faa'iido ah kuma lihi inaad si fiican u darajayso. Haddii qalabkaaga elektaroonigga ahi uu yaraado ama uu leeyahay khibrad isticmaale moobiil oo liita, waad bixi kartaa